Milaza tsy hiasa ao Rosia intsony ny vondrona famoahan-gazety fanadihadiana OCCRP · Global Voices teny Malagasy
Voatondro ho "kasinga vahiny" ireo mpiara-miombon'antoka amin'i OCCRP ao Rosia
Voadika ny 17 Septambra 2021 4:22 GMT
Tetikasa Fitoriana (ireo) fikambanan-jiolahy sy kolikoly. Sary nampindramin'ny occrp.org.
Nanambara ny fampiatoany ny asa rehetra ataony ao Rosia ny Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP na Tetikasa fitoriana ireo fikambanan-jiolahy sy kolikoly), tambajotram-panoratan-gazety fanadihadiana iraisampirenena, ho fiarovana ireo mpanao gazety iarahany miasa mba tsy ho tratran'ny tsindrin'ny fanjakana.
Nilaza i Drew Sullivan, mpiara-manorina sady lehiben'ny fanoratana OCCRP, tao amin'ny fanambaràna navoaka tao amin'ny tranonkalan'ny fikambanana tamin'ny 15 septambra fa “manimba kokoa fa tsy manasoa” ireo mpitati-baovao ao Rosia ny asan-dry zareo ao anatin'ny faritra rosiana.
Tsy midika izany fa hitsahatra amin'ny fitaterana ireo kolikoly mihanaka ao amin'io firenena io izahay. Azonay fotsiny fa raha io governemanta io, tahaka izay efa nataony hatrizay, dia hanasazy ny olom-pirenena ao aminy noho ny fiarahany miasa aminay.
Nilaza ny OCCRP tao amin'ny fanambaràna nataony fa nanasa ireo Rosiana mpiasa sy mpiara-miombon'asa aminy izy hifindra ampitan-tsisitany ahafahany manohy ny asany ao amin'ny vondrona. Nandoavana tambim-pialàna sy nanomezan-tanana hahita asa vaovao ireo nandà izany.
Tamin'ny fiandohan'ity taona ity, nanondro seha-baovao tsy miankina sy mpanao gazety rosiana ho “kasinga vahiny” ny minisiteran'ny Fitsarana rosiana na lazain'ny manampahefana rosiana ho fikambanana “manelingelina” izany, ka tafiditra ao ny ankamaroan'ny mpiara-miombon'antoka amin'ny OCCRP.
Takian'ny lalàna rosiana ny fikambanana na ny tsirairay voatondro ho kasinga vahiny hisoratra anarana any amin'ny fanjakana na raha tsy izany dia hiatrika fanasaziana. Takiana ihany koa ry zareo hanao tatitra ara-potoana ny asa ataony sy hanondro ny maha-kasinga vahiny azy ireo amin'izay votoaty na fitaovana rehetra aelin-dry zareo, ka ao anatin'izany ny ranty media sosialy. Ho an'ny seha-mpampitam-baovao manokana, ny fanondroana azy ireo ho kasinga vahiny no mampananosarotra ny asan-dry zareo sy ny fidiram-bolan-dry zareo, ka manery azy ireo hanakaton-trano na hifindra any ivelany.
Niteny i Paul Radu, mpiara-manorina ny OCCRP sady talen'ny fikarakaran-java-baovao, fa andry iankinana amin'ny fahombiazan'ny fikambanana ireo Rosiana mpanao gazety.
Nataon-dry zareo izay hananan'ny mpiray tanindrazana amin-dry zareo hahazo tati-baovao tsy miangatra ao anatin'ny fotoana anenjehan'ny governemantan'i Potinina ankarihary ny fampitam-baovao tsy miankina.
Tamin'ny 14 Septambra ny OCCRP namoaka tatitra fanadihadiana momba ilay lazaina ho “vehivavy miaraka” amin'ny minisitry ny raharaham-bahiny rosiana Sergey Lavrov sy ny fananany vola antoka mipetraka any ivelany izay tsy voazava ny nahazoany azy. Izany tatitra izany dia niarahana niasa tamin'ny iStories, seha-baovao fanadihadiana rosiana iray hafa izay vao avy nopetahana marika ho “kasinga vahiny.”
Nampanantena i Paul Radu ao amin'ny OCCRP fa hanohy amin'ny famoahana fahadihadiana momba an'i Rosia.
Mpiantsehatra manana ny tanjany izay mampiely ny kolikoly sy ny fandisoam-baovao na ao amin'ny sehatry ny faritra na eo amin'ny sehatra iraisampirenena ny governemanta rosiana, raha miezaka ny manakorontana firenen-kafa. Tsy hangina ny amin'izany izahay.
Ny Tetikasa fitoriana ireo fikambanan-jiolahy sy ny kolikoly, niorina tamin'ny taona 2006, dia vondrona iarahan'ny foibe fanadihadiana, fampitam-baovao ary mpanao gazety miasa amin'ny firenena mihoatra ny 50 manerana an'i Eoropa Atsinanana, Azia Afovoany, Kaokazy, Amerika Afovoany – ary hatramin'ity taona 2021 ity, dia i Etazonia sy i Canada. Ny tena ahafantarana ny vondrona dia ny tetikasany mampiseho ny kolikoly iarahan'ny mpiray firenena miampita sisintany, fanadiovam-bola ary ireo andrim-pitahirizambola mifandrohy amin'ireo mpiasam-panjakana (mpitondra) malaza, toy ny “Panama Papers,” “Paradise Papers” ary ny “Troika Laundromat.” Vao tsy ela izay ny OCCRP namoaka ny “Project Pegasus,” mifantoka amin'ny fitsikilovana ireo mpiray firenena any ampita sy ny rindram-pitsikilovana indostrialy.